रङ नम्बरमा गरिएको फोनका कारण प्रेम मात्र होइन, विवाह नै भयो ! यस्तो छ रोचक प्रेम कहानी – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on रङ नम्बरमा गरिएको फोनका कारण प्रेम मात्र होइन, विवाह नै भयो ! यस्तो छ रोचक प्रेम कहानी
सामाजिक सञ्जालबाट मायाप्रेम भएका खबर त धेरै सुनिएकाे छ तर भारतमा रङ नम्बरमा गरिएको फोनका कारण प्रेम मात्र होइन, विवाह नै भएको छ। २ वर्ष पहिले मोतिहारीकी पूजाले गलत नम्बर डायल गर्दा मुजफ्फरपुरको औराई निवासी रवि कुमारलाई फोन गयो।दुवैबीच कुराकानी भयो र रङ नम्बर परेको थाहा भएपछि फोन काटियो। तर दुई दिनपछि रविले मिस्ड कल गरे। यसपटक पूजाले कल ब्याक गरिन्। फेरि दुई जनाबीच संवाद भयो। झगडा पनि भयो। तर यही झगडा अन्ततः प्रेममा परिणत भयो।
← महिलालाई यस्तो गर्दै हिडेपछि समाजले यी युवकलाई का लो मसो द’लेर जु त्ताको मालासहित बजार घुमाइयो → धनतेरसको एक दिन अगाडि जान्नुहोस् ९ महत्वपूर्ण नियम, भोलि गल्ती सच्याउने मौका मिल्दैन